aasaasaha Web ku baaqay in biilka Internet xuquuqda - Rule News
biilka A xuquuqda la abuuray waa in ay maamulaan internetka ee Duke of Aayaadka ku saabsan qoto dheer ee ilaalada dowladda, hindisa ee World Wide Web ayaa sheegay Arbacadii.
Tim Berners-Lee dhigay soo jeedinta iyada oo qayb ka mid ah “web waxaan dooneynaa” Ololaha loogu talagalay Internet furan, dhab ahaan 25 sano ka dib markii uu marka hore soo bandhigay warqad leh qorshe World Wide Web.
“Waxaan u baahanahay dastuur caalami ah — biil xuquuqda,” ayuu u sheegay The Guardian-ka.
“Haddii aynaan helin furan, Internet-dhexaad aan ku kalsoonaan kartaa oo aan ka werwerayn oo ku saabsan waxa ka dhacaya albaabka dib, aan haysan karaan dowladda furan, dimuqraadiyadda wanaagsan, caafimaadka wanaagsan, bulshooyinka xiran iyo kala duwanaanshaha dhaqanka,” ayuu yiri.
“Waa aan ahayn kas gaab in qabaa inaan yeelan karaan in, laakiin waa arinku inay qabaa inaan kaliya dib ugu fadhiisan karo iyo aad u hesho.”
Ololaha ayaa ku baaqay in on web-isticmaale adduunka oo dhan qabyada ah “Users Internet Bill of Rights aad dalka, waayo, gobolka ama dhan”.
Berners-Lee ayaa si joogto ah u ololeeyey yar gacanta ku webka, oo uu ku amaanay qandaraasle hore ee sirdoonka Maraykanka Edward Snowden ka dib markii uu shaaca ka qaaday faahfaahinta sida dowladda Mareykanka ururiya tacsida xogta online.
Berners-Lee ka digay in xuquuqda dadka ahaayeen “lagu xad badan oo dhinac kasta” iyo in dadka isticmaala Internet-ka ayaa noqday qanco ku saabsan lumista xorriyaadka.
“Sidaas daraaddeed waxaan u rabto in aad isticmaasho guuradii 25-innaga dhammaanteen u bixiyey inay sameeyaan, in la qaato webka dib annagoo gacmahayaga ku galay oo qeexaya web aan rabno xiga 25 sano,” ayuu yiri.
Berners-Lee uuraysatay Web ku dhowaad 25 sano ka hor in uu waqtiga firaaqada ah ee Geneva ku salaysan khusan,, shaybaarka top physics walxaha Yurub.
21740	0 khusan,, Edward Snowden, Geneva, Guardian, Hay'adda Nabad-sugidda Qaranka, Tim Berners-Lee, United States, World Wide Web
← Sevastopol, goobta of guulaheedii Ruush, dooneysa inay 'gurigaaga tag’ 20 Xallinta Home waxgal Waayo, cagahoodu oo barara →